Kubuntu နှင့် Xubuntu, တိုးတက်လာသောနှင့်အကြံပြုထုတ်ကုန်နှစ်ခု | Linux မှ
Kubuntu နှင့် Xubuntu နှစ်ခုတို့သည်တိုးတက်ပြီးထောက်ခံသည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
ငါအရမ်းရှင်းလင်းသောအရာတစ်ခုခုရှိသည်: ကတည်းက Kubuntu y Xubuntu သူတို့ကထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ရပ်ရွာသူတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖြန့်ဝေမှုများဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါခြေလှမ်းယုတ္တိဖြစ်ခဲ့သည်။ Canonical မှသူ၏ ဦး ဆောင်သော စီအီးအို အရိပ်ထဲမှာသူအမြဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့နှင့်ဤမျိုးကွဲအောင်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး, ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခု, ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးအရာကမှကယ်နှုတ်တော်မူရန် ရပ်ရွာ repositories, isos, etc စသည်တို့ကိုလိုအပ်သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြင့်သာကူညီပေးနေသည်။
ပိုဆိုးလာဖို့ဝေး Kubuntu y Xubuntu သူတို့ထက်ပိုသောရှေ့သို့မည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်ကိုသူတို့သိကြပြီး Phoenix ကဲ့သို့ပြန်လည်မွေးဖွားလာကြသည်။ ဖြန့်ချိခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရုံသာမကတည်ငြိမ်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလှအပတို့တွင်ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့လျှင်၎င်းကိုရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
မနေ့ကငါနှစ် ဦး စလုံးဖြန့်ဝေ install လုပ်ပါ VirtualBox ငါတကယ်ကိုအရမ်းကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
De Xubuntu ကျွန်ုပ်တွင်ထည့်စရာများစွာမရှိပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းသိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် KDE အကြောင်းကိုငါ့အစားပွဲပေါ်မှာသိမ်းပိုက်သည် Debian စစ်ဆေးခြင်း, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်မှု၌ငါနှစ် ဦး စလုံး၌ပြစ်မှားမိပါပြီ LiveCD နှင့် VirtualBoxငါပစပ်၌နှစ်သက်ဘွယ်သောအရသာ ရှိ၍၊
ဒီမူကွဲနောက်ကွယ်မှအသိုင်းအဝိုင်းသည်အထူးသဖြင့်အနုပညာလက်ရာများကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်ဂရုစိုက်ပြီးရလဒ်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ Xfce 4.10 ၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည် Xubuntu၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာအတွက် "အလင်း" တစ်ခုခုလိုချင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအလွန်အမင်းတောင်းဆိုခြင်းမခံရသရွေ့၎င်းသည်ကြိုးစားရန်မထိခိုက်ပါ။
ဤအတောအတွင်း Kubuntu 900MB ကျော်လေးသော iso တစ်ခုတွင်အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်သည် KDE ၄.၉ ၎င်း၏တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသည်။ အကယ်၍များ သူတို့ကငါ့ကိုဖြန့်ဖြူးမှုအကြောင်းမေးတယ် လိုလားသူ KDE အသုံးပြုရန်သံသယမရှိဘဲငါဖော်ပြခဲ့ကြလိမ့်မယ် Chakra u တော့ openSUSE, ဒါပေမယ့်လောလောဆယ်ငါမဆိုင်းမတွထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Kubuntu ဒါပေမယ့်ငါ့ debian မဆိုးပါဘူး
Kubuntu လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူသည်အဆိုးဝါးဆုံးဖြန့်ဝေမှုတစ်ခု၏ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည် လိုလားသူ KDE ဒါဟာလျော့နည်းဘို့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သေချာတာပေါ့, ပြောင်းလဲမှု KDE 3.X ဗားရှင်း ၀.X ငါသည်လည်းအတိတ်၊ အတိတ်၊
တိုတောင်းသော, နောက်ဆက်ဆွဲပေမယ့် "Ubuntu" သူတို့၏ဖြန့်ချိရေးများသည်သူတို့၏အသိုက်မှထွက်လာသောအသိုက်မှနေ့တိုင်းဝေးကွာသွားသည်ဟုသူတို့ထင်မြင်ယူဆကြသည် ( Canonical ) သူတို့ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ဂုဏ်သတင်းသည်စကားလုံးများမဟုတ်ဘဲမြင်သာထင်သာဖြစ်ရပ်မှန်များဖြင့်သန့်စင်နေသည်။ +1 နှစ် ဦး လုံးအတွက် ... 😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Kubuntu နှင့် Xubuntu နှစ်ခုတို့သည်တိုးတက်ပြီးထောက်ခံသည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်
ဒီနေ့ငါ Xubuntu 12.10 ကို install လုပ်ပြီးကောင်းပြီ။ တကယ်တော့ငါ Ubuntu 12.10 ကို install လုပ်ပြီးနှေးကွေးနေတယ်။ မိနစ် ၉၀ အကြာမှာ Xubuntu 90bit ကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီး nVidia, Chrome နှင့် Spotify နှင့်ပျားရည်ထည့်သွင်းခြင်း၊ 64Mb RAM ပိုင်ဆိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်၌ 306Gb ရှိသည်။ ကွာခြားလိုက်တာ !! အခြားပိုကောင်းတဲ့ Xfce distros တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမခံစားမိရင်ရေပိုက်ပြင်တာကိုမကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပိုနှစ်သက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ "ubuntu မြင်ကွင်း" နဲ့ဖြေရှင်းပြီးသား repositories နှင့် tutorials အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုရမယ်။
အမှု၌သင်သည်ငါ၏မထင်မှတ်ကြည့်ချင်, heh heh ။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး။ ငါ Canonical ယူပြီး ဦး တည်ချက်အတော်လေးငြင်းခုန်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ (Ubuntu ကိုသက်သောင့်သက်သာရှိသည့်လူများရှိသော်လည်း)
ဒီ distros နှစ်ခုကိုအသိုင်းအဝိုင်းကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အနိုင်ရလိုက်ပါ။
ငါ (Linux အပါအ ၀ င်) Linux သို့ကူးပြောင်းလာသည့်လူအများစုသိရှိထားသောအမှုအများစုသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင် Ubuntu ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ အခုဒီလူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိလာမှာပါ။ အချို့ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ခက်ခဲပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲ -ubuntu သည်သန်းပေါင်းများစွာသောသန်းပေါင်းများစွာသော Linux ရှိဤကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာတွင်စတင်ခဲ့သူများအတွက်အရာများကိုအတော်လေးလွယ်ကူစေသည်။ မှရွေးချယ်ဖို့ဖြန့်ဝေ။
စကားမစပ် elav သည်စွမ်းဆောင်ရည် (install လုပ်ပြီးပါက) အတွက်ဥပမာအားဖြင့် Debian + XFCE (သို့) KDE ၏မျက်နှာသာပေးမှု၌ရှိသလား။ သို့မဟုတ်ပါကအနုပညာလက်ရာများနှင့်သူတို့ပေးရသည့်လွယ်ကူမှုအတွက်ပိုလား။ သိသာထင်ရှားသည်မှာမည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုစွမ်းဆောင်ချက်တွင်မဆိုသင်မည်သို့သိနိုင်မည်ဆိုပါကပိုမိုကောင်းမွန်စွာတိုးတက်လာနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
စကားမစပ်၊ Elav သည်စွမ်းဆောင်ရည်အရ (install လုပ်ပြီးသည်နှင့်) ဥပမာ၊ Debian + XFCE သို့မဟုတ် KDE ၏မျက်နှာသာပေးမှုတွင်ရှိသလား။ "
ကျွန်ုပ်သည်အဲလဗတ်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမသေးသောကြောင့်၎င်းသည် (ဟားခါးတွင်ဂီတအကြောင်းအငြင်းပွားရန်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော) regaetton နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိစ္စရပ်များတွင်ဗဟုသုတများစွာမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်တွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးနိုင်လျှင်သင်မေးပါ။
4.8mb စတင်သောအခါ Debian Testing နှင့် XFCE 135 သုံးစွဲမှုသည် ati proprietary driver ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ 100mb ၌ကျန်ရှိနေသည့်အရာများနှင့်အတူ boot သို့ 235 MB သို့ပြန်ဆိုသောအခါပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်မူပိုင်ခွင့်ရှိသောဒရိုင်ဘာသည် အခမဲ့
12.10mb ထက်နည်းသော booting နှင့် driver ကို 4.10mb ပတ်လည်တွင်ပြောင်းလဲချိန်တွင် Xubuntu 265 + xfce 330 သုံးစွဲမှုသည်ကျွန်ုပ်အားပေးသောသုံးစွဲမှုလျော့နည်းသည်။
ယခုငါ xubuntu သည်အလင်းလုံးဝမဟုတ်၊ အချို့သောပရိုဂရမ်များနှင့်ကပ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရုံးဖွင့်လှစ်စဉ်တွင်ရုံးဖွင့်လှစ်ထားသည့် Free 3.65. Office ဗားရှင်း 4.8၊ debian တွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ငါ့ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကတရားဝင် repos ကနေ xfce5ကိုမွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိဘူး၊ အခုငါ xubuntu ကိုသုံးပတ်လောက်သုံးနေပြီးစမ်းသပ်မှုတွေပြီးအောင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ထပ်တင်တော့မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ debian တွင် ၅ နာရီ ပို၍ နည်းပြီး xubuntu သည် ၃ နာရီထက်မပိုနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Ariki ကိုနှုတ်ဆက်သည်။
Xubuntu ၏ပြproblemနာက Xfce ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် daemons / applications များကိုစီးဆင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Xubce နှင့် Xubuntu နှင့် Debian အကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ Debian နဲ့ Xfce က (1GB RAM နဲ့) 67MB နဲ့ငါ့ကိုစခဲ့တယ်။
67mb သင့်မှာ nvidia card ရှိလို့လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ati အတွက်ယာဉ်မောင်းတွေဆိုတာတကယ့်ကိုတဒင်္ဂပါပဲ။ » $ » hehehe greetings elav ။
ငါ NVidia (သို့) ATI ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး၊ Intel မှာအမြဲတမ်းပေါင်းစပ်ထားတယ်
ငါ့မှာ ATI ရှိတယ်။ ၎င်းသည် ATI အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် ATI ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ XFCE ပါတဲ့ကျွန်တော့် LinuxMint က 120MB ကျော်ပဲသုံးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ Mint menu ကိုထည့်လိုက်လို့ပါ။ ငါထွက်ရှိနောက်ထပ်တစ်ခု nVidia ရှိပြီးနောက်ဆုံးပေါ် Xubuntu ကိုငါတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ RAM အသုံးပြုမှုသည် 130MB အောက်တွင်ရှိသည်။
Startup မှာဘာတွေတင်နေတယ်ဆိုတာစစ်ဆေးပါ။ များသောအားဖြင့်သင့်မှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိပြီးသား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Bluetooth ကိုနေ့စဉ်နှင့်မကြာခဏသုံးလေ့ရှိသလား။ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့အဲဒါကိုအားသွင်းမပေးပါနဲ့ ဒီလိုမျိုး
ကျွန်တော့်အပေါ်“ ချိတ်ဆွဲထား” သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် CPU အလွန်သုံးသော Pidgin ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်။ ။ ငါ script တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ CPU အသုံးပြုမှုကို ၂၀% အထိကန့်သတ်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ဘယ်တော့မှချိတ်ဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူး။
Kubuntu ငါမသိပေမယ့် Xubuntu ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်။ ငါ Unity Ubuntu ရောက်တဲ့အခါငါစသုံးခဲ့တယ်။ အဲ့တာကငါ့ရဲ့ PC ကိုမချန်ခဲ့ဘူး။ ငါသိပ်မကြိုက်တာတစ်ခုကအပြင်ပန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ မင်းဘာသာရပ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။
သင်၌နောက်ဆုံးပေါ် Xubuntu (သို့မဟုတ်သင် XFCE 4.10 ပေါ်တွင်တင်ထားသောတစ်ခု) ရှိပါကသင် MintMenu ကိုတပ်ဆင်နိုင်ပြီးရှုထောင့်ကအနည်းငယ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဒီတော့ငါမှာ Xubuntu စက်ရှိတယ်။
ငါ Kubuntu နဲ့အတူလအတော်ကြာနေခဲ့ပြီးအမှန်တရားကအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ငါ Unity ကိုမကြိုက်တော့ Ubuntu ကထွက်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့် LMDE နဲ့စခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါငြီးငွေ့လာတယ်။ အလုပ်မလုပ်သေးတဲ့အရာအနည်းငယ်ရှိလို့ KDE နဲ့စပြီးဖြန့်ဝေတာကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် OpenSuse၊ Chakra နဲ့တခြားသူတွေနဲ့စခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံးမှာတော့ sound နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemsနာရှိခဲ့ပါတယ်။ Kubuntu ကို Install လုပ်ပါ။
ငါ av လဗနှင့်အတူ * untu မိသားစု၏ဤပုံစံနှစ်မျိုး၏ဖော်ပြချက်ကိုမျှဝေသည်မှာသူတို့သည်သူတို့၏အခြေခံပတ်ဝန်းကျင် (XFCE နှင့် KDE) အပေါ်သစ္စာရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ငါထင်သည်မှာ XFCE သည်မျှော်လင့်ချက်များစွာနှင့်ပြည့်စုံပြီး KDE (ကျွန်ုပ်သည်ဤပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအသုံးပြုသူမဟုတ်သော်လည်း) အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သဖြင့်နှစ် ဦး စလုံးသည်သင်၏ desktop အောက်ရှိအကောင်းဆုံး distros အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ Luntus Luntus ထပ်ထည့်ပါ့မယ်။ XFCE လိုမျိုး၊ သူတို့ဟာသန့်ရှင်းပေါ့ပါးပြီးရိုးရှင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ၊ များစွာသော applications တွေ၊ repositories နဲ့မလိုအပ်တဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေမရှိပါဘူး။
ယခုတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ၏မည်သည့် version ကိုမဆိုစောဒကတက်နေပြီး၊ ပုံမှန် package ရွေးချယ်မှုကိုမနှစ်သက်။ LMDE ကိုပိုနှစ်သက်သောကြောင့်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အချိန်မရောက်သေးဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ငါ SolusOS သို့မဟုတ် Debian စမ်းသပ်ခြင်းကို KDE နှင့်ဆင်ခြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် Kubuntu သည်တကယ်တည်ငြိမ်ပြီးယခုအချိန်တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်သည်စမ်းကြည့်ပါလိမ့်မည် (QT ကိုမှီခိုခြင်းကကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာတစ် ဦး ကိုထည့်ရန်အလွန်ဆင်ခြေပေးလိမ့်မည် - Krusader)
Elav အတွက် ဟုသူကပြောသည်
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အလွန်ဆင်တူသည့်အကြောင်းအရာများစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤဘလော့ဂ်ကိုမှတ်မိရန်မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်ထံလာရောက်လည်ပတ်သူများသည်ထိုစကားလုံး (ဘလော့ဂ်၊ ဘလော့ဂ်) ၏နောက်ကွယ်ရှိအယူအဆနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုသိပါကထုတ်ဝေသောအရာအပေါ်တွင်ကန့်သတ်ချက်များမရှိကြောင်းသူတို့သိလိမ့်မည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးက GNU / Linux ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်။
Kubuntu ကင်းမဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်တူသည်ဟုခံစားစေသောကောင်းသည့်ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရသာသည်၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုသာမန်အားဖြင့်သာတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမကြိုက်ပါ။
+1 ယခုအချိန်တွင် kubuntu သည်အလိုအပ်ဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။
Ignacio Monge ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တာကတော့ Kubuntu ဟာ Macer ကိုသူ့ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအတွက် Chakra လုပ်ထားသလိုမျိုးဒီ distro အတွက်အထူးဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။
Ignacio Monge အားပြန်ပြောပါ
Malcer သည် chakra xD ကိုသုံးသည်
လုံးဝသဘောတူသည်မှာ ၅ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲလိုက်လျှင်ပင်၎င်းသည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေးသည့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်နောက်ခံပုံများမပါရှိပါ။
တကယ်တော့ကျနော့်အမြင်အရ Ubuntu ကနေ Lubuntu အထိဖြန့်ဝေမှုအားလုံးရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ခံစားမှုကအတူတူဖြစ်သင့်ပါတယ်။
လူးဝစ် Alverto ဟုသူကပြောသည်
ခင်ဗျားက Debian စမ်းသပ်သူတစ်ယောက်လို့မင်းပြောပြီးကတည်းကဒီ distro version ကို personal desktop တစ်ခုလိုသဘောထားချင်တယ်။
Luis Alverto အားပြန်ပြောပါ
elav debian စမ်းသပ်ခြင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် !!
ဒီနှစ်ခုထဲက Kubuntu နဲ့ Xubuntu အတွက်ကောင်းတယ်၊ Xubuntu ကအမြဲတမ်းပြmeနာအနည်းဆုံးပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ 'buntu' ကို install လုပ်ချင်တဲ့သူကဒါကိုငါထောက်ခံတယ်။
ငါ Xubuntu 12.04 64 bits ကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည်ပျံသန်းသည်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သမျှအကောင်းဆုံး၊ မိတ်ကပ်ကိုချခြင်း၊ မလိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောပရိုဂရမ်များထည့်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Xubuntu ကိုရပ်ရွာကထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ဒါကောင်းလားဆိုးလားလား။
ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှထိန်းသိမ်းထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကော်ပိုရိတ်ပိုင်ရှင်များထက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ The Community ကထိန်းသိမ်းထားသောဖြန့်ဖြူးမှုကိုသင်ပိုမိုနှစ်သက်သောအကြောင်းပြချက်များသည် ၄ ​​င်းသည်ကောင်းသည် (သို့) ဆိုးလျှင်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုသောအရာများဖြစ်သည်။ Xubuntu က၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
အလွန်ကောင်းသောသူငယ်ချင်းများ Linux I (Kubuntu နှင့် Xubuntu) နှစ်ခုစလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်၏ခြားနားချက်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်၊ အမှန်တရားမှာ Xubuntu သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းတွင် Kubuntu ကိုအချက်များစွာယူပြီးယခုအချို့သည် XFCE သည်ရုပ်ဆိုးပြီးမုသားဖြစ်သည်၊ သင် configure လုပ်ပြီးညှိရန်လိုသည်။ အခုဆိုရင် Xubuntu 12.10 ကိုအလုပ်နဲ့အိမ်မှာအဆင်ပြေပါတယ်။ အခုဆိုရင်ငါ Linux နဲ့ပိုရင်းနှီးလာပြီ။ ငါအလုပ်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ Linux ကိုသုံးဖို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့တယ် (သူတို့ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပိုကောင်းတယ်) နဲ့ ps အခုငါတို့အားလုံး "FREE"
BenPaz, သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုဤကမ္ဘာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ် "FREE" (FSF concept) ဖြစ်ရန်အတွက်သင်ရေးသားစဉ်တွင် Linux ကိုမဟုတ်ဘဲ "GNU / Linux" စနစ်ကိုခေါ်ရန်စဉ်းစားသင့်သည် မဟုတ်ရင်သူတို့ဟာ OpenEN (open source ရဲ့စိတ်ကိုပိုပြီးစာနာတတ်တဲ့သူ) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါ့ကို hahaha မေးမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါထွက်ရှာတွေ့ http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
ဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့သယ်ဆောင်မည့် OS ကိုစဉ်းစားရန်ကောင်း၏။
ငါ Kubuntu 12.04 ကိုတစ်လခွဲလောက်ကြာအောင်သုံးနေပြီး KDE ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာငြင်းဆိုပြီးအရသာမတွေ့ရလို့ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျခဲ့တယ်။ သူပိုင်ဆိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ Dolphin, Okular နှင့် Amarok ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမြင်အာရုံအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် RAM (နှင့်စွမ်းအင်) သုံးစွဲမှုသည် ၁.၃ GB သာ Firefox နှင့် Amarok ကိုဖွင့်ထားပါသည်။ ငါယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိနှင့်ဘက်ထရီမပါဘဲတိုက်ရိုက် Laptop ကိုသုံးပေမယ့်ငါကသာ၎င်း၏ဘတ်ဂျက်အားသွင်းဖို့ကျန်ကြွင်းသောခန့်မှန်းခြေအချိန်ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ဘယ်လို KDE အတွက်ငါမဘတ်ထရီနှင့်သာအသုံးပြုသည့်အခါငါက၎င်း၏ဘဝကိုလျှော့ချကြည့်ရှုငါရာခိုင်နှုန်းကိုငါကြည့်ရှုကြဘူးဒါပေမယ့်ငါလည်းစိတ်ဝင်စားအချိန် ) ။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Xubuntu သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီး၎င်းကိုဖွင့်လိုက်သည်မှာ MB ၃၀၀ ကျော် (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Firefox နှင့် Clementine ရှိပါက ၆၀၀ MB ခန့်) သုံးစွဲသည်။ gtk ပရိုဂရမ်များပိုမိုကောင်းမွန်စွာပေါင်းစည်းထားခြင်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ခန့်မှန်းခြေဘက်ထရီအချိန် (နှင့်ကြာကြာခံနိုင်သည့်) ကိုကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ပြီးမကြာမီအရာအားလုံးစီးဆင်းသွားသည်။ ဆိုးကျိုးကတော့ Thunar သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့် KDE ၏ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများမရှိပါ။
ငါခက်ခဲတယ်ဆိုတာသိပေမယ့်မင်းဘာလုပ်မလဲ လက်တော့ပ်ပေါ်ရှိ Kubuntu သို့မဟုတ် Xubuntu
၎င်းသည် Samsung 300VA4A: Intel Core i3 နှင့်4GB RAM ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အခက်ခဲဆုံးအသုံးပြုမှုမှာဓာတ်ပုံများတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Friend Emanuel ငါတူတူတူပါတဲ့လက်တော့ပ်တစ်လုံးရှိတယ်။ အမှန်တရားကတော့ငါ Xubuntu ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပဲ။ (ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ Toshiba i3 လက်ပ်တော့ ၄ ခုရှိသည့်မှတ်စုဖြစ်သည်။ )
+ အမှန်တရားကတော့ Wine or CrossOver ကိုသုံးတဲ့အခါ "Windows" အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများဟာပိုကောင်းလာတယ်။
+ Thunar အကြောင်း version 1.5.1 ကိုဤပစ္စည်းထည့်ပါ။
+ Ubuntu ဆော့ဝဲစင်တာတွင်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
Xubuntu ရဲ့ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကိုမင်းကိုတွေ့မြင်စေခဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ စက်ကဒီထက်နည်းတယ်။ ၎င်းကို desktop ပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းလက်တော့ပ်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။
ငါနဲ့ 3Gigas ပါတဲ့လက်တော့ပ်တူ i4 ရှိတယ်။ ငါ kde ကိုဖွင့်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုအသုံးပြုတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပေးတယ်။ ဥပမာ၊ xfce ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ krunner၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ kioslaves ... နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင် kde ကိရိယာများ (လင်းပိုင်၊ okular၊ ကိတ်၊ kmail, ခြင်းတောင်း၊ yakuake) သို့မဟုတ် qt (vlc, clementine) နှင့် gtk (libreoffice နှင့် chromium) အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည်။
KDE ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ Laptop Battery ဘယ်လိုနေလဲ။ စက်ကအရမ်းပူလာသလား
Xubuntu နဲ့အတူကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ Virtual Box တွင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးကြော့ရှင်းပါသည်။ သို့သော် Kubuntu ဖြင့်သင့်ကိုလုံးဝမှန်ကန်စွာပေးရပါမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် entry ကို။ လေးစားပါတယ်
ငါနှစ် ဦး လုံးကြိုးစားခဲ့ပြီး Kubuntu နှင့် Xubuntu နှစ်မျိုးလုံးသည် Ubuntu ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်လက်ခံသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Xubuntu နှင့် ၂ နှစ်နီးပါးနေခဲ့ပြီး၎င်းသည်ငါ၌အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးသောတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဗားရှင်းတစ်ခုစီနှင့် Ubuntu ကိုအခြေခံထားသောကြောင့် အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်များနှင့်၎င်းသည်ထင်မြင်ယူဆရသောအလင်းများမဟုတ်သည့်အမှားများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Manjaro Linus XFCE သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ယခုငါတည်ငြိမ်မှု၊ ရိုးရှင်းမှုနှင့်မြန်နှုန်းတို့သည် ... မည်သည့်အရာကိုမဆိုအားရရွှင်လန်းစေသည်။ နှင့် Xubuntu တို့မှတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘဲအခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်ပထမ ဦး ဆုံး linux မှာ distub kubuntu 5.04 ဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကတော့ကျွန်တော် xubuntu ဗားရှင်း ၈.၁၀ ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်အများကြီးတိုးတက်လာခဲ့သည်။
သူတို့တိုးတက်လာသောအရာများအတွက်သူတို့သည်ကြီးရင့်ရမည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန် မရှိ၍ အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Microsoft Office Seminar) (Microsoft Office Seminar) တွင် ၀ င်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အားမပေးပါ။ တစ် partition ကိုလုပ်ရတဲ့သွားပါ။ LM7ကို LD 13 နှင့် Laptop ကို ပြောင်းလဲ၍ မရဝံ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အချိန်ရောက်သောအခါ livecd ကိုသာစမ်းကြည့်ပါလိမ့်မည်။ desktop ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်၏ debian စစ်ဆေးခြင်းကို LM XNUMX ကိုမပြောင်းရဲပါ။
ငါ Kubuntu အရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ အရမ်းကောင်းတယ်။ : OR
ငါ Kubuntu 12.04 used ကိုသုံးသောအခါ (ယခုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော distro haha ​​သို့ပြန်သွားသည်) ၏စာတန်းသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါအင်တာနက်သုံးသူများ ငါ Xubuntu 12.04 ကိုသုံးတယ်။ ငါတကယ်ပျော်တယ်။ ကျွန်တော်ကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ Linux လေ့လာသူပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ distro ကတကယ်တည်ငြိမ်တယ်၊
ငါမေးချင်တာတစ်ခုက ၄.၁၀ ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သင့်လား။ အများကြီးကွာခြားမှုရှိပါသလားသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများထွက်ပေါ်လာရန်နှစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်ပိုကောင်းပါသလော။
ဓာတ်ပုံများနှင့်ဖိုင်များသာမက Fierfox၊ Filezilla၊ Gimpm အတွက်စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအခြားပရိုဂရမ်များရှိစကားဝှက်ဒေတာအားလုံးကိုသာမက update နှင့်သိမ်းဆည်းရန်လွယ်ကူပါသလား။
မေးခွန်းကအရမ်းမိုက်တယ်ဆိုရင်ငါတောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါကငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတာပဲ၊ အခွင့်အရေးရတာယူပြီးမင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါ့အတွက် Xfce 4.8 နဲ့ Xfce 4.10 အကြားမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိတယ်။ ၎င်းတွင်ဒြပ်စင်များအားခြစ်ရာမှပရိုဂရမ်များ၊ ပိုများသော bug fixes များရှိပြီးလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များထည့်သွင်းထားပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကောင်းပြီ၊ မင်းငါ့ကိုယုံကြည်ပြီ ယခုငါမေးခွန်း၏ဒုတိယအပိုင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာယူပြီးအရာအားလုံးကိုဗားရှင်းအသစ်သို့ကူးပြောင်းရန်ဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ယူပါတော့မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်မူယခုရောဂါဖြစ်နေသောကြောင့်လွယ်ကူစွာယူခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ )
ပြီးတော့ nah မှာ data ဆုံးရှုံးမှုကိုစိတ်မပူပါနဲ့ ... သင် format မလုပ်ခင်သင်ဘာမှမဆုံးရှုံးသင့်ပါ။ losing ဆုံးရှုံးမှုကိုစိတ်မပူပါနဲ့😉
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။ မေးခွန်းကမိုက်မဲရာကျသည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။ 😀
စကားမစပ် Xubuntu ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ တည်ငြိမ်မှု၊ အမြန်နှုန်းနဲ့ရိုးရှင်းမှုတွေကိုတခြားအရာအားလုံးထက်ပိုနှစ်သက်တယ်။
ဦး စွာ ဦး တည်။ ရည်မှန်းချက်ထားရန်ကြိုးစားခြင်းသည် Ubuntu ကိုထောက်ခံအားပေးမှုအတွက် Canonical ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Ubuntu ကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။
ငါ Kubuntu တိကျတဲ့နှင့် Quantal နှစ် ဦး စလုံးသည်အလွန် distro ကြောင်းသဘောတူ Xubuntu 12.04 ငါသုံးလလောက်သုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁၂.၁၀ ငါက VirtualBox မှာသာစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ Kubuntu Precise သည် Quantal ထက်တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးပုံရသည်။
GNOME Shell ကိုငါကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့် Ubuntu မှာတစ်ခါတလေသုံးတယ်။ ငါ KDE ကိုကြိုက်တယ်၊ ပြproblemနာကဘာလဲဆိုတာဘယ်သူ့ကိုသိတယ်၊ ငါဟာ 90GHz Core တစ်ခုစီမှာ ၉၀% လောက်စားတယ်၊ Fedora (နဲ့ OpenSUSE, ငါထင်တယ်) ၂၀% ထက်မပိုဘူး ... ဒါပေမယ့်ဒါငါသုံးတယ် လက်ရှိ KDE ဖြင့် OpenSUSE; တစ်ခါတစ်ရံမှာအသေးအဖွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားရမယ်၊ ဒါကြောင့်အရာအားလုံးနှေးမသွားဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီအခိုက်အတန့်ဆုံးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသုံးပြီးဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့အရာ ...
wow, မှော်အိတ်ကပ်။ ထိုပြtheနာသည် ... "overload" သည် Firefox တွင်ဖြစ်ပုံရသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည် GNOME Shell တွင်မဖြစ်ခဲ့ပါ။ _
ဒီတစ်ခါလည်း NVIDIA ယာဉ်မောင်းကြောင့်လား GNoME Shell ထဲမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်မထည့်သွင်းခဲ့ဘူး။
မေးခွန်း elav, kubuntu သို့မဟုတ် debian testing-kde?
Sergio Esau Arámbula Duran ဟုသူကပြောသည်
ငါရိုးရိုးသားသား Kubuntu 12.10 ကိုသုံးပြီးကောင်းလိုက်တာ။ ငါတပတ်လောက်သုံးပြီးငါစိတ်ဝင်စားတယ် - ငါ Kubuntero XD ဖြစ်လာတယ်
ငါတကယ်ပဲ KDE 4.9 (SUSE ၌အသစ်တင်လိုက်သည်) သည်အံ့ is စရာကောင်းသည်ဟုထင်သည်။ ၄.၈ တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသော Blur effect နှင့် activated windows များကို minimize လုပ်ရန်တစ်ခုမျှမရှိ။ Silk လိုမျိုး GTK application များတောင်မှ Firefox သို့မဟုတ် XChat ကဲ့သို့ ...
စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်ကတကယ်ကိုသိသာထင်ရှားပေမယ့် Laptop ကတော်တော်သမိုင်းမကျသေးတာကြောင့်တခါတရံမှာတော့ lag သေခြင်းမှတစ်စုံတစ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရတာပုံမှန်ပါပဲ။
Kubuntu 12.10 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်အနည်းငယ်စမ်းသပ်လိုပါက OpenSUSE ကိုစမ်းသုံးရန်အကြံပေးလိုသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည် KDE distro ထူးချွန်မှုဖြစ်ပြီး၊ YaST သို့မဟုတ် Zypper ကဲ့သို့သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးကိရိယာများရှိသည်။
ငါ GNOME Shell ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းသည် kdm appear တွင်ပေါ်မလာပါ
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ xubuntu ဖြင့်လူသစ်ပါ၊ သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုအလုပ်တစ်ခုပေးခဲ့ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် (ကျွန်ုပ်ကြည့်သည်၊ သို့သော်သီအိုရီတစ်ခုသာထွက်လာလျှင်) ပြproblemနာကဤအရာအားလုံးကို virtual machine တွင် configure လုပ်ရမယ်။
192.168.1.0 ကနေ 192.168.1.30 မှထောက်ပံ့ကြေးအကွာအဝေးနှင့်အတူ 192.168.1.100 ကွန်ယက်
•တည်ငြိမ်သောထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ကွန်ပျူတာ ၂ ခု -
o ပထမတစ်ခုကို router လို့ခေါ်တယ်။ @MAC ကိုတီထွင်ပြီး IP ရှိလိမ့်မည်။ 192.168.1.254
o ဒုတိယတစ်ခုကိုပရင်တာဟုခေါ်တွင်သည်။ @MAC ကိုလည်းတီထွင်ပြီး IP ရှိလိမ့်မည် - 192.168.1.253
အောက်ပါအရင်းအမြစ်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူ db.zona1 ဖိုင်
ns2.iescaparrella.cat နှင့် ns1.iescaparrella.cat ဟုခေါ်သောကွဲပြားခြားနားသော nameserver ၂ ခု
server.iescaparrella.cat အမည်ရှိ 1server စက်
ဆာဗာအတွက်တစ် ဦး က www alias ကို
o ဆာဗာအတွက် ftp alias တစ်ခု
o ဆာဗာအတွက် cloud alias တစ်ခု
သို့မဟုတ် host4, host1, host2 နှင့် host3 အမည်များရှိသောအသုံးပြုသူကွန်ပျူတာများ (သို့) ၄ ခု
ဤအရာအားလုံးကို xubuntu တွင်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်သည် KDE ကိုဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် desktop နှင့် windows များကိုပြုပြင်လိုသောသူများအနက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာ (အသွင်သဏ္ဌာန်) အရ "ငါ့ကိုဖြည့်သော" အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေသည်။
ငါ KDE ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါ့ကိုဖြည့်ခဲ့တယ်။ Unity ထက်ပိုပြီးငါ Xubuntu ကိုအများကြီးမစမ်းသပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာ Linux ကလာတဲ့အရာအားလုံးလိုအရည်အသွေးကောင်းတစ်ခုလို့ငါသေချာတယ်။
El Gato Lópezအားပြန်ပြောပါ
Jhon Zamora ဟုသူကပြောသည်
လက်ရှိ (၂၀၁၀၉ ခုနှစ်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ရေးသည့်နှစ်) ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများကိုစီမံခြင်းအတွက် Dualboot: Xubuntu 2019 နှင့် Windows 18.04 (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဗတ္တိဇံပေးသောပညာရေးဝန်းကျင်တွင်အများအားဖြင့်သုံးသောကြောင့်) တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Xubuntu တွေအများကြီး။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုရှာဖွေရာတွင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးခြင်းကိုလောင်းကစားခြင်းအတွက်နောင်တမရပါ။
Jhon Zamora ကိုစာပြန်ပါ
သင်၏ Terminal တွင်လှည့်ကွက်များ၊ သိချင်စိတ်များနှင့်ပျော်စရာများ။
Linux အတွက် Steam (beta) ကိုရနိုင်သည်။